Badoo ဆိုတာဘာလဲ တစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
Software ကို & Apps ကပ အီးမေးလ်ပို့ရန် & Messaging ကို
Badoo: အဆိုပါစကားပြောခန်း, ချိန်းတွေ့နှင့် social networking site app ကို
သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်အလားအလာရက်စွဲများတွေ့ဆုံရန်ရှာဖွေနေအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်တီထွင်, Badoo လျင်မြန်စွာကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကြားတွင်နေထိုင်တက်ယူလိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ အွန်လိုင်းချက်တင် , ချိန်းတွေ့နှင့် လူမှုကွန်ယက် 190 ကျော်နိုင်ငံများတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နိုဝင်ဘာလ 2006 ခုနှစ်မှာ Soho ဗဟိုလန်ဒန်ရဲ့ posh အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာဖြန့်ချိခြင်းနှင့်သန်း 200 ကျော်အသုံးပြုသူများသည်ဝါကြွားတတ်။
အဆိုပါ site ကို join နဲ့သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ Badoo ခရက်ဒစ် ရရှိခဲ့ပြီးနှင့်အပိုဆောင်းသော့ဖွင့်ဖို့ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် စူပါအင်အားကြီးနိုင်ငံများ ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ် Paypal အားဖြင့်ပေးဆောင်နှင့်အင်္ဂါရပ်များ။
အပိုင်းလက်ငင်း Messenger ကို, အပိုင်းလူမှုကွန်ယက်
အဘယ်အရာကိုလူသစ် chat နှင့်တွေ့ဆုံရန်နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့တဲ့လူမှုကွန်ယက်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့တစ်ခုခုမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Badoo ယခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ပြသနိုင်ဖို့ profile များကိုတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျစာပုံး, instant messaging / စကားပြောခန်း, နှင့်ဓါတ်ပုံ / ဗွီဒီယိုအယ်လ်ဘမ်အပါအဝင်အကျွမ်းတဝင် features တွေ, များစွာသောလူပါရှိပါတယ်။
Badoo မှတ်ပုံတင်ရေး သင်သည်သူတို့၏က်ဘ်ဆိုက်, ဒါမှမဟုတ် iPhone နှင့် Android device များအတွက်၎င်းတို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံ app ကိုအသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ, အခမဲ့နှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်တစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းကြာပါသည်။ တစ်ဦးက မိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သင်အနေနဲ့ app ကို download ဒါမှမဟုတ်သင်အဟောင်းမော်ဒယ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသုံးပါလျှင်ရန်မလိုချင်ကြဘူးဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်း, ထိတွေ့မှု၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းတပ်ဆင်ထား Facebook မှာ authentication ကို သင်ပိုမိုအချိန်သစ်ကိုအသုံးပြုသူများကတှေ့ဆုံနှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်မပေးဖြုန်းဖို့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်အတန်ငယ်လွယ်သော။ ရိုးရှင်းစွာအသင်၏ပရိုဖိုင်ဓါတ်ပုံတွေကိုတင်သွင်းအပါအဝင်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးရန် Badoo enable တံ့သောသင့်ရဲ့ Facebook username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အဘယ်အရာကို Badoo ထံမှမျှော်လင့်ရန်
သင်အသုံးပြုပဲဖြစ်ဖြစ် iPhone အတွက် Badoo , အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် chat ဖို့က်ဘ်ဆိုက်, အင်္ဂါရပ်န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကြားမှာအနှံ့နီးပါးတူညီကြသည်။ ဤနေရာတွင်ကသင်သည်လူသစ်နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device တစ်ခုခုအပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အပေါငျးတို့သစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာပါ။
ပရိုဖိုင်းကို။ အဆိုပါပရိုဖိုင်းကိုအခြားအသုံးပြုသူများမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနိဒါန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးပထမဆုံးစှဲစေဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို add နှင့်အလားတူအကျိုးစီးပွားသင်တွေ့နှင့်အတူအခြားသူများကိုကူညီပေးဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းဖြည့်စွက်ရန်။ ပြီးတာနဲ့ကိုယ့်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်း app ရဲ့ထိပ်မှာသင်တို့၏နာမကို click အတွက် logged ။ အတွက်လက်မှတ်ထိုးအကူအညီတောင်းအောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ပါ။
Badoo မှခုနှစ်တွင် Sign
မိုဘိုင်း Web ကိုခုနှစ်တွင် Sign
iPhone အတွက်အတွက် Log
Android အတွက်ခုနှစ်တွင် Sign
မက်ဆေ့ခ်ျ။ သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ရှိမရှိ, သင်သည်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများ Inbox ထဲတွင်အခြားအဖွဲ့ဝင်များကနေချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအော့ဖ်လိုင်းစဉ်ကိုစလှေတျမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် chat နှင့် Badoo ကစေလွှတ်သည် "နေ့၏ App ကို" နှင့် "နေ့ဓာတ်ပုံ" ထုတ်စစ်ဆေးရန်သင့်စာပုံးသွားရောက်ကြည့်ရှု။
ဘယ်လို Badoo ဆက်သွယ်ရန်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါရန်
မိုဘိုင်း Web ပေါ်ရှိမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ
iPhone ပေါ်မှာ Badoo ကိုမက်ဆေ့ခ်ျ
အနီးအနားပြည်သူ့။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အဘို့အ Badoo ရှာရန် နှင့်အတူအလားအလာရက်စွဲများ "အနီးတဝိုက်ရှိပြည်သူ့။ " သင်လည်းညာဘက်ထိပ်ပေါ်မှ settings ကို icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မတူညီသောပထဝီတည်နေရာအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Desktop ပေါ်မှာ, သင်နောက်ထပ်အသက်အားဖြင့်အနီးအနားရှိကျားကလူကိုစီစစ်, သငျ, chat "", မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ် "" သို့မဟုတ် "နေ့စွဲချင်ပါတယ်ရှိမရှိနိုင်တယ်။ "
တွေ့ဆုံ။ "ဟော့ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်" အဆင့် apps များနှင့်ဆင်တူသည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသင်အလားအလာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျကိုမကျင့်လျှင်အချို့ကိုသင်အကျိုးစီးပွား, ဒါမှမဟုတ် "X" အိုင်ကွန်ရှိပါကစိတျနှလုံးအအိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ တွေ့ဆုံသည်အခြား Badoo အဖွဲ့ဝင်များ၏ profile များကို browse ရန်နှင့်သင်၌စိတ်ဝင်စားသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်, အမြန်ပျော်စရာနှင့်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်း Web ပေါ်ရှိတှေ့ဆုံ Play
Android ပေါ်မှာတှေ့ဆုံဂိမ်း Play
iPhone ပေါ်မှာတှေ့ဆုံဂိမ်း Play
အနှစ်သက်ဆုံး။ သင် "လူတွေကအနီးတဝိုက်ကို" အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူရှာဖွေသကဲ့သို့သင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ Badoo ပရိုဖိုင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သင်ကြယ်သင်္ကေတကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းထဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်း Web ပေါ်ရှိအနှစ်သက်ဆုံး Add လုပ်နည်း
အိုင်ဖုန်း App ကိုအပေါ်အနှစ်သက်ဆုံး
ဧည့်သည်။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖြတ်ပြီးလဲတတ်သောကြည့်ဖို့လိုပါသလား? အဆိုပါ "လာရောက်လည်ပတ်သူများ" အင်္ဂါရပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကရှုမြင်ကြသည်သည့်အခါဒီနေရာတွင်, သင့်ပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြသူလူများစာရင်းကိုရှာတှေ့နိုငျနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ Badoo ပေါ်တွင်သင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်အလားတူအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူသည် "လူတွေကအနီးတဝိုက်ကို" အင်္ဂါရပ်ကတဆင့်သငျသညျကိုတှေ့သူတို့သည်အထူးသဖြင့်တွေ့ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်း Web ပေါ်ရှိလာရောက်လည်ပတ်သူများ View ကိုဘယ်လို
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်။ အောင်မြင်သောတှေ့ဆုံပေါင်းစည်းနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ သင်နှင့်ရင်ဆိုင်အင်္ဂါရပ်၌သင်တို့၏ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကဲ့သို့အခြားသောအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆိုပါက, သင်သည်ဤအပိုင်းမှတဆင့်အကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ခံစားခကျြနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖြစ်ကြကတည်းကမပိုဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပြဿနာရှိမရှိအဖြစ်ခန့်မှန်းလည်းမရှိ။
ပိတ်ဆို့။ တစ်စုံတစ်ဦးကအတူနောက်ထပ်အပြန်အလှန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်ပါသလား? block Badoo အဖွဲ့ဝင်များနှင့်သင်ဆက်သွယ်သို့မဟုတ်သင့်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်တှေ့ဆုံခြိနျတှငျသူတို့ကိုမြင်နေမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်လော့။
McAfee က SpamKiller 5.1 - ပမ် Filter ကို
YPOPs! 0.9.5 - အခမဲ့ Yahoo! အီးမေးလ်အစီအစဉ် Gateway မှာ pop မှ Mail ကို
အဘယ်အရာကိုသင်က Netscape က 7.2 အကြောင်းသိထားဖို့လို, Plus အားအဘယ်မှာရှိဒါဟာ Download မှ
9 အခမဲ့ iPhone & iPod touch နဲ့ဖုန်းနဲ့စာပို့ Apps ကပ
အခမဲ့ Universal ဆဲလ်ဖုန်းဆော့ဝဲနဲ့ Shareware
Samsung က Feature ကိုဖုန်းများအတွက်ထိပ်တန်း6Applications ကို
Badoo အွန်လိုင်း Chat ကိုနှင့်ချိန်းတွေ့ App ကို: Beginners များအတွက်လမ်းညွှန်
Mozilla က SeaMonkey - အခမဲ့အီးမေးလ်အစီအစဉ်
Mail.com နှင့် GMX Mail - အခမဲ့အီးမေးလ်န်ဆောင်မှုများ
တစ်ဦးကို Windows Recovery ကို Partition ခွဲဖျက်ပစ်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
ထပ်မံကျ3အောင်မြင်မှုများလမ်းညွှန်: Bobblehead တည်နေရာများ
ဒီဇိုင်း-Your-ကိုယ်ပိုင်ကို T-Shirt Software များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ
OS X ကို Finder ကိုရဲ့ Sidebar မှစမတ်ရှာဖွေမှု Restore
Microsoft က Windows 8.1 ကို
သင့်ရဲ့ TiVO အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ခံရနေရမည်အဘယ်ကြောင့်
တစ်ဦးက Business Card ကို၏ Element တွေကို
ITunes Sync ကိုဘယ်လိုသာလျှင်အချို့သောသီချင်းများတိုက်ဆိုင်ညှိယူရန်
Photoshop Elements များတွင် Cutout စာသား Effect
နိုင်ငံရေး Robocalls Block လုပ်နည်း
ကူခြင်းသင့်ရဲ့ Mac ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် mouse ကို Make
Empathy တို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ IM ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တစ်ဦး Daily သတင်းစာဂျာနယ်သိမ်းဆည်းထားပါနှင့် Evernote နှင့်အတူပန်းတိုင်စစ်မည်
တစ်ဦး Wi-Fi Connection ကိုအတူသို့မဟုတ်မရှိရင် AirDrop
အကောင်းဆုံး Rolling Laptop ကိုအိတ်၏အင်္ဂါရပ်များခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
ဘယ်လို Microsoft Word ကို 2013 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးစားပွဲတင်ထည့်ရန်
Snapchat ပုံပြင်များ vs. Instagram ကိုဇာတ်လမ်းများ
အဘယ်အရာကို '' ကွန်ယက် Path ကိုမတွေ့ရှိပါ '' ဘယ်အချိန်မှာလုပ်ပါမှ Windows တွင်ဖြစ်ပေါ်ရန်
အဆိုပါ3ထိပ်တန်း Bitcoin သတ္တုတွင်းနည်းလမ်းများ